Arrinta muhaajiriinta qaaradda Aasiya oo laga shiraya - BBC News Somali
Arrinta muhaajiriinta qaaradda Aasiya oo laga shiraya
29 Maajo 2015
Image caption Dadkani muhaajiriinta ah ayaa ka cararaya dhibaato ka jirta waddamadooda.
Saraakiisha 17 dal iyo hay'ado caalami ah ayaa waxa ay wadahadalo deg deg ah oo ku saabsan dhibaatada dadka muhaajiriinta ah ku haysato koonfur bari qaaradda Aasiya waxa ay ku leeyihiin waddanka Thailand.
Dhowr kun oo qof oo ka qaxaya waddamada Myanmar iyo Bangladesh ayaa waxa ay dhanka badda ugu cararayaan waddamada Malaysia iyo Indonesia kaddib markii ay Thailand billowgii bishan ay billowday howlgal ay ku soo qabqabanayso kooxaha dadka tahriibiya.
Wadahadaladani ayaa waxaa ka qayb qaadanaya waddamada xubnaha ka ah ururka koonfur bari aasiya iyo wakiilo ka socda mareykanka iyo qaramada midoobey.
Waxaana ayna u dhowdahay in kulankaasi uusan ka soo bixin wax heshiis ah oo wax ku ool ah maadaama wafuudda ka qaybgalaysa aysan wada gaarsiisanayn heer wasiirro iyo iyadoo waddamada qaar ayba rajo la’aan ka muujiyeen kulankani.
Tusaale ahaanna, waddanka Myanmar oo dadka ka soo jeeda qowmiyadda Rohingya u diidan muwaadinnimada waddankaasi isla markaana dadkaasi ka dhigay dad aan dal la hayn ayaa rajo xumo ka muujiyay heshiis halkaasi lagu gaaro.
Bangladesh iyo Myanmar ayaa waxa soo wajahay qulqulka dadka ku qaxaya doomaha ee sii maraya Thailand, Indonesia iyo Malaysia.
Waxaana kummanaan ka tirsan dadkaasi la rumeysan yahay in ay ku xayiran yihiin badda dhexdeeda, iyaga oo saaran doomo kooxihii watay ay ka carareen, intooda bandanna waa muhaajiriin ka cararaya dhibaato dhaqaale xumo, waxa ayna ka kala yimaadeen waddanka Bangladesh iyo muslimiinta Rohingya ee ka cararaya dhibaatada ka jirta Myanmar.
Dhibaatada ku saabsan muhaajiriinta Aasiya ayaa billaabatay kaddib markii horraantii sanadkan uu dalka Thailand billaabay hawlgal ka dhan ah muhaajiriinta dhulkeeda socdaalka ku maraya, waxa ayna taa ku khasabtay kooxaha burcadka ah ee dadka tahriibiya in ay ganacsigooda tahriibinta u weeciyaan dhanka badda.
Waddamada intooda badan ma doonayaan in ay qaataan dadkaasi qaxootiga ah, waxa ayna ka cabsi qabaan in haddii ay sidaasi yeelaan dhibaatada ay ka sii dari karto oo dad badan ay dalalkaasi magangelyo u soo raadsan doonaan.
Waddamada Malaysia iyo Indonesia waxa ay iyagu ogolaadeen in ay magangelyo ku meel gaar ah siiyaan dadka barriga soo gaaray iyo in ay joojinayaan in ay doomaha badda ka soo saaraan. Balse Thailand waxa ay sheegtay in ay joojinayso doomaha.